Meelaaniyaan godaansa daa'imaniirratti abbaa manaashee qeeqxe - BBC News Afaan Oromoo
Meelaaniyaan godaansa daa'imaniirratti abbaa manaashee qeeqxe
18 Waxabajjii 2018
Goodayyaa suuraa Suura yeroo daa'imman maatii isaaniirraa adda ba'an
Giifti-dureen Yuunaayitid Isteeti Meelaaniyaan Tiraamp imaammata walmormisiisaadha jedhame kan maatii godaantota seeraan ala biyyattii seenan gargar baasurratti yaaddoo qabdu ibsite.
"Ani daa'imman yeroo isaan maatii isaaniirraa adda ba'an arguun baayee na jibbisiisa," kan jettu Maleeniyaan "imaammata godaantotaa fooyyaa'e arguun barbaada" jette.
Yaadni giiftittiiin kun kaaste, imaammata godaantotaa irratti "obsa isa dhumaa" baayyee walmormiisiisaa jiru Tiraampi fudhachaa jiruun walqabateeti.
Giiftidureen duraanii Laawuraa Bushilleen imaammaticha "aad-male" jechuun mormaniiru.
Godaantota seeraan ala daangaa ce'anirratti, tarkaanfii Tiraampi torban ja'an darbani fudhateen yoo xiqqate maatiin 2,000 ta'an adda ba'aniiru.
Namoonni ga'eessota ta'an seeraan ala daangaa Ameerikaa seenanii kolu galtummaa gaafatan qabamanii seeratti dhiyaatu.
Sababii kanaatiif daa'imman dabalatee namoonni of hin dandeenye buufata to'annaa keessa akka tursiifamaniif dirqamaniiru.
Giifti Maleeniyaan akka yaade ishee kennitetti, "daa'imman maatii isaaniirraa yeroo adda ba'an arguun na jibbisiisa; kanaaf gareen lamaanuu [Rippabilikaanonniifi Dimokiraatonni] dhumarratti waliif galanii fooyyaa'insa seeraan alaa milkeessu" jedheen abdadha.
"Nuti biyya seera kabaju ta'uu qabna, garuu biyya qajeelummaa yaadus ta'uu qabna" jette Giiftittiin.
Goodayyaa suuraa Giiftii Ameerikaa Maleeniyaa Tiraamp
Amma maaltu ta'aa jira?
Manneen hidhaa biroon daa'iman keessa tursiifaman - ijoollee xixiqqoo warra reefuu daa'imanillee ni dabalata - kun ammoo dhaabbileen daa'imman guddisan bakka ga'aa akka hin qabne akka isaan taasise dubbataa jiru.
Imaammanni kun ni hojjetaa?
Lakkoofsi godaantota seeraan ala ragaa malee Ameerikaa seenan dabalaa jira.
Akka aanga'oota Ameerikaa warra daangaa eeganiitti, erga imaammni dhimma godaantotaa "obsa dhumaa" jedhu ba'ee yeroo torban tokko keessatti, ijoollee warra daa'iman dabalatee 658 ta'an maatii isaaniirraa adda ba'aniiru.
'Dhimmi badhaasa Abiyyi, dhimma Oromoofi Itoophiyaati'
Dubartiin gurraattii manasheetti poolisiin ajjeefamte
Daandiin Baahirdaar irraa Finfinnee geessu baname
Haleellaa Masjiidaa Burkinaa Faasoon lubbuun dabre
MM Abiy dhuguma Baha Afrikaatti nagaa buusaniiruu?
Obomboleettiin cimaa Jaappaan raasaa jira
Umurii 45'tti suuta deemuun 'mallattoo dullumaati' jedhame
Kipchoogeen Maaratoonii sa'aatii lamaa gad fiiguu danda'e
'Uummatni kaka'uumsa isaatiin gammachuu isaa ibsachuuf baha'